Himalaya Dainik » झोलामा चक्कु बोकेर स्कुल जान्छिन् सुरक्षा
झोलामा चक्कु बोकेर स्कुल जान्छिन् सुरक्षा
सुरक्षा कोटेश्वरकै ब्रेनहर्ट बोर्डिङ स्कुलको कक्षा ६ मा पढ्छिन् । आमाछोरीको कुरा मजाकमा उडिरहेको थियो । तर विषय गम्भीर पनि थियो । ‘दैनिकजसो बलात्कार र हत्याकै घट्ना समाचारमा सुनिन्छ । बुवाले प्रत्येक दिन पत्रिका ल्याउनुहुन्छ । जहिले पनि बलात्कार र हत्याकै घटना छ्याछ्याप्ती छापिएको देख्छु’, सुरक्षाले भनिन् ।
स्कुल, कलेज जान पनि बालिका डराउँछन् । जसले गर्दा उनीहरु स्कुल कलेज पढ्न जाँदा पनि हुल बाँधेर जान खोज्छन् । स्कुल कलेज नपुगुन्जेल मनमा तीनै कुराहरू खेलाउँदै, डराउँदै कक्षा कोठासम्म पुग्ने गर्छन् । तर पनि भयमुक्त हुँदैनन् । परिणाम त स्कुल कलेजमा पढ्न जाने छोरीचेलीको सङ्ख्या पनि घट्नेक्रम बढेको छ ।
आफूले विदेशमा कमाएको धेरैजसो पैसा छोराछोरीको पढाइमा खर्चिन्छन् । त्यसैले सरकारी स्कुलको भन्दा प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलतिर बढी आकर्षण बढेको छ । तर गार्जनको शिक्षामा भएको लगानी अनुसार शैक्षिक स्तर छैन । व्यावसायिक करणमा बदलिएको छ । लगानी अनुसारको शिक्षाको गुणस्तरीयता छैन । यसले विगतको भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा अन्धविश्वास बढाएको छ । वैदेशिक रेमिटान्सको पनि सही सदुपयोग छैन ।
त्यसैले निर्मला पन्तलगायतका बालात्कार र हत्या प्रकरणको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ । थामथुम पारेर समस्याको सामाधान गर्न सकिँदैन । मुलुक योभन्दा पनि अस्तव्यस्त हुन सक्छ । अपराधीहरू पता लगाउन नसक्दा निर्मलाहरूको सङ्ख्या घट्नुको साटो बढ्ने क्रमै छ । सरकारको अनुसन्धान निकाय नै असक्षम रहेको प्रस्ट भइसकेको छ । त्यसैले सरकार एक महिलामाथि हुने बलात्कार र हिंसामा कमी आउने क्रमको सुरुवात कहिले हुन्छ सरकार ? यसको जवाफ नागरिकले खोजिरहेका छ ।
त्यसैले सरकार ! बलात्कार र हिंसालगायतका घट्नाहरू अन्त्य कहिले हुन्छ ? सरकारका लागि यो सामान्य कुरा होइन र ? अनि किन आलटाल र आँखामा छारो हाल्ने काम हुँदैछ ? के निर्मलाहरू यो देशको छोरी होइनन् ? हो भन्ने यसको फैसला कसले गर्ने ? यसर्थ सरकार सामाधान भएन र यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने स्कुल, कलेज र रोडहरूमा चक्कु बोकेर गुन्डाहरू होइन अब त सुरक्षाकर्मीका रुपमा छोरीचेली भेटिनेछन् ।
प्रकाशित मिति १८ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:५५